ပရိသတ်အများကြီးရဲ့ အချစ်ကို ထပ်မံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့်
၃ သန်း ၃သောင်းကျော်ဖြစ်သွားပြီတဲ့။
ပရိသတ်ပေါင်းများစွာတို့ရဲ့ အချစ်ကို ထပ်မံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့်က သူမရဲ့ We Love တွေကို ဘယ်လောက်အထိ ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြလာပါတယ်။
သက်မွန်မြင့်က သူမကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်ပေါင်း ၃ သန်း ၃ သောင်းကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိုက်လို့ အရမ်းကို ဝမ်းသာနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
‘’Like ၃ သန်းနဲ့ ၃ သောင်း ကျော်သွားလို့ ပျော်နေတဲ့ ယောသူ မပေါက်စ လေး! ရုပ်ကိုက ဒီနေ့ စ လိုက်တာ များသွားရင် Sorry ပါနော်။ ခုမှ ညရှုတင်ပြီးလို့ နားမှ တင်ရတာမို့ တစ်နေကုန်တစ်ညလုံး ဖြစ်သွားတယ်.. Sorry ‘’ ဆိုပြီးတော့ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့ မနက် ၁၂ နာရီ ၅၄ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်မှာလည်း ပရိသတ် Like 3,039,413 , နဲ့ Follow လုပ်ထားသူပေါင်း 3,118,429 တို့ ရှိပါတယ်။
သက်မွန်မြင့်က သူ့ရဲ့ ပရိသတ်လေးတွေကို ချစ်စနိုးနဲ့ Yellow Hearts လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒီပရိသတ်လေးတွေကလည်း သူမ ဘယ်သွားသွား အနီးဆုံးမှာ ရှိနေတတ်သူတွေပါ။ သက်မွန်ကိုယ်တိုင်ကလည်း We Love လေးတွေကို အရမ်းချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
''ဘယ်ချိန်မဆို ဘယ်နေရာမဆို အမြဲဝန်းရံပြီး ချစ်နိုင်ကြလွန်းသူ ကျွန်မရဲ့ အဝါရောင်တပ်မတော် Yellow Hearts တချို့ တချို့ အလုပ်က ပိတ်ရက်ကို မထွက်ရလို့ video call ခေါ်င်္ပြး ငိုသူငို သူတို့လည်း ကိုယ့်ဆို ကလေးဆိုးကြီးဆိုပြီး ရစ်သမျှ ချွဲသမျှ ခံပြီး ချစ်ကြတာ အာ့ကြောင့် ကျွန်မ ခုချိန်ထိ မရင့်ကျက်တာ'' လို့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။
အဲဒီနောက် ပရိသတ်တွေကလည်း သူမကို အရမ်းချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ၊ စိတ်ပူနေကြတဲ့ အကြောင်းတွေကို Comment ကနေတဆင့် ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ သက်မွန်မြင့်က လက်ရှိ နယ်မှာ ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ကူးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ကာရိုက်တာ ဓာတ်ပုံလေးတွေကနေတဆင့် တောသူမလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။